५ ओटा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले ९ महीनामा कमाए रू. २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी नाफा | आर्थिक अभियान
जेठ ९, काठमाडौं । पाँच ओटा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीले चालू आवको ९ महीना अर्थात् तेस्रो त्रैमाससम्ममा कुल रू.२ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् ।
हिमालयन डिष्टीलरी, शिवम् सिमेण्ट, बोटलर्स नेपाल तराई, बोटलर्स नेपाल बालाजु र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले उक्त नाफा कमाएका हुन् । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको तुलनामा भने ३ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा पाँच ओटा कम्पनीले कुल रू. २ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएका थिए ।
हाल नेप्सेमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका छ ओटा कम्पनी कारोबारमा आउने गर्दछन् । कारोबारमा आउने छ ओटा कम्पनीमध्ये नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले भने चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण हालसम्ममा सार्वजनिक गरेको छैन । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका पाँच ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा हिमालयन डिष्टीलरीले कमाएको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ७८ करोड ८३ लाख नाफा कमाएको हो । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा १७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. ६७ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी गत आवको तुलनामा चालू आवमा ३० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा रू. ३ अर्ब ९८ करोड सञ्चालन आम्दानी भएकोमा चालू आवमा बढेर रू. ५ अर्ब १८ करोड पुगेको हो । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका पाँच कम्पनीमध्ये शिवम् सिमेण्ट र युनिलिभर नेपालको नाफा घटेको छ भने बाँकी तीन ओटा कम्पनीको नाफा बढेको छ ।
शिवम् सिमेण्टको नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवमा ३९ प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीले गत आवमा १ अर्ब भन्दा बढी नाफा कमाएकोमा चालू आवमा रू. ६५ करोड ६८ लाखमा सिमित भएको हो । चालू आवमा यस कम्पनीको खर्चमा वृद्धि भएपछि आम्दानी घटेकाले नाफा घट्न पुगेको हो ।
त्यसैगरी युनिलिभर नेपालको नाफा पनि गत आवको तुलनामा चालू आवमा ३१ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीले गत आवमा रू. ३२ करोड १६ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा रू. २२ करोड ४ लाखमा झरेको हो ।
चालू आवमा यस कम्पनीको आम्दानी घटेकाले नाफा घट्न पुगेको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. १ अर्ब ७३ करोड आम्दानी गरेकोमा चालू आवमा रू. १ अर्ब ६४ करोडमा सीमित भएको हो ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी बोटलर्स नेपाल बालाजुको नाफा गत आवमा भन्दा चालू आवमा ६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवमा रू.२९ करोड ४६ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा बढेर रू. ४८ करोड १३ लाखमा पुगेको हो । चालू आवमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो ।
गत आवमा कम्पनीले रू. ६ अर्ब १९ करोड आम्दानी गरेकोमा चालू आवमा बढेर रू. ७ अर्ब ९२ करोड पुगेको हो । त्यसैगरी बोटलर्स नेपाल तराईले चालू आवमा रू. ५० करोड ५८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको तुलनामा ३६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवमा रू. ३७ करोड १४ लाख नाफा कमाएको थियो ।
ती कम्पनीको उत्पादन तथा वस्तु विक्री आम्दानीमा वृद्धिसँगै नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । कोभिड १९ पछि व्यवसायिक गतिविधि बढेसँगै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको नाफामा वृद्धि भएको हो ।